'Wayengumfundi oqotho uNoma' | IOL Isolezwe
'Wayengumfundi oqotho uNoma'
Isolezwe / 1 December 2016, 3:21pm / mcebo mpungose
UNOMA eshuthe nabanye abafundi ayefunda nabo ngo2012 Isithombe; DOCTOR NGCOBO
IKHWAYA yesikole saseMaritzburg Christian School ekade ifundiswa uNoma Isithombe; DOCTOR NGCOBO
NGEMPELASONTO edlule kuqopheke umlando isicoco sama-Idols, sinqotshwa okokuqala owesifazane waKwaZulu-Natal, uNoma Khumalo.
Ezinye zezinto ezimangaze abaningi ngoNoma (22) ukuthi ungene kulo mncintiswano esuka emsebenzini wakhe wokuba nguthisha esikoleni esisendaweni akhulele kuyo eMgungundlovu, iMaritzburg Christian School, lapho ebefundisa khona abafundi bamabanga aphansi ngokunjalo neHigh School. Into yokuqala lo mculi ayibalulile emva kokunqoba lo mncintiswano ukuthi ungene kuwo ngoba efuna ukufundisa abafundi bakhe ukuthi nabo bangawafeza amaphupho abo.
Izolo ithimba leSolezwe uMCEBO MPUNGOSE, nomthwebuli uDOCTOR NGCOBO, bahambele lesi sikole, uNoma afunde kuso kwaze kwaba uphothula uGrade 12. UNoma ufundele ubuthishela e-Unisa.
Ekufikeni kulesi sikole esixube zonke izinhlanga, inhlonipho yinto yokuqala eqaphelekayo njengoba iningi labafundi belibingelela. Siholelwe egunjini lothisha lapho bekukhona omunye wothisha bakhe abamfundisa uGrade 12 kulesi sikole ngo-2012, uNksz Jan Griffin, othe enye yezinto ezingaziwa ngoNoma ngukuthi wayeyinhloko yabafundi kulesi sikole.
“Uma kukhulunywa ngenhloko yabafundi eqotho emlandweni wethu singambala nabanye abahambe phambili. Ubuholi bakhe babuncomeka kakhulu ngonyaka ka-2012 kwazise kwakunabafundi ababedinga ukuqondiswa, wayekwazi ukuxhumana kahle nabo. Wayesondelene kakhulu nabafundi abasemabangeni aphansi, ngicabanga ukuthi yilapho abona khona ukuthi ufuna ukuba nguthisha,” kusho uJan.
Lo thisha uthe uNoma ubengomunye wabafundi obekulula ukusebenzisana nabo ekilasini ngenxa yendlela abeziphatha ngayo. Uthe waqala kulesi sikole ukucula ehola ikhwaya.
“Ngonyaka wakhe wokugcina waba nethuba eliyingqayisivele lokuyoculela uNdlunkulu waseNgilandi nekhwaya yalesi sikole, ehamba futhi njengenhloko yesikole,” kuchaza uJan obesekhiphe ibhuku eliqophe konke okwenzeka kulesi sikole ngo-2012. Kuleli phephabhuku lesikole elibizwa nge-Year Book uNoma unamakhasi akhe amabili ekhuluma ngempilo yakhe kulesi sikole.
Kusakhulunywa nothisha, Isolezwe libe selizwa ngamazwi amtoti abevela ehholo kungathi kukhona ikhwaya eculayo.
“Ikhwaya yakhe leyo eculayo, selokhu ashiya waya kuma-Idols, abafundi banogqozi lokuqhubeka nalokhu ayebafundisa khona,” kusho omunye uthisha kulesi sikole uLisa Martin.
Le khwaya, uNoma ayishiya ngoJuni nonyaka, isale ezandleni zomfundi ofunda uGrade 9 uHlengiwe Ncalane (14) waseBisley, eMgungundlovu.
“Ngabona ukuthi angithathe izintambo ngoba wayengekho ooqhamukile ukuthi enze lo msebenzi,” kusho uHlengiwe eveza elomhlathi.
“Sijabule kakhulu ngokunqoba kukaNoma ngoba bese kuneminyaka simcela ukuthi angene kuma-Idols. Mina ngaqala ukumcela esangifundisa ukucula kwaGrade 7 ukuthi angenele kwaze kwaba uyangenela nonyaka. Ukunqoba kwakhe kusijabulisile, sonke besingakholwa,” usho kanje.
Omunye wabantu abebehola imkhankaso yokuthi kuvotelwe uNoma, uNhlakanipho Mlotshwa, uthe bajabule kakhulu ngokuhlanganyela ndawonye ukumeseka kulo mncintiswano.